जानिराखौ ! यस्ता गु*ण भएकी नारी घरमा छिन् भने मान्नुस् तपाईंको घर स्व*र्ग समान ! —
यस्ता गुण भएकी नारी घरमा छिन् भने मान्नुस् तपाईंको घर स्व*र्ग समान जानिराखौ ! : सास्त्रका अनुसार भनिन्छ एउटा सफल पुरुषको पछाडि एकजना असल नारीको भूमिका हुन्छ । हुनपनि असल नारी भएको घर नै स्व*र्ग समान हुन्छ ।शास्त्रले पनि यहि बताउँदै आएको छ की असल नारी कुनैपनि घरको गहना हो । यहाँ हामीले नारीमा हुनुपर्ने केही गुणहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन गुण हुने नारीहरु भएको घर स्व*र्ग समान हुन्छ ।
यस्ता गुण भएकी नारी घरमा छिन् भने मान्नुस् तपाईंको घर स्व*र्ग समान जानिराखौ !
जुन नारी मीठो बचन बोल्छिन , जुन नारीको आवाज मधुर छ र हरेक क्षण मायालु बोली÷ब्यवहार दर्शाउँछिन् भने त्यस्ता नारी भएको घर स्वर्गसमान हुन्छ । – कुनैपनि घरमा आस्तिक, सेवा भाव राख्ने, क्षमतावना, दयावान र कर्तव्य पालना गर्ने नारी छिन् भने मान्नुस् त्यो घर स्व*र्ग समान हुन्छ । – जो स्त्री तनले भन्दा मनले सुन्दर छिन् त्यस्तो घर पनि सुन्दर बगैंचा जस्तै हुन्छ ।– जो नारीले घरमा आएका पाहुनालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छीन् भने त्यो घरमा पनि दे*वताका बास हुन्छ । – अर्काको दुखमा सहयोग गर्ने नारीले पनि आफ्नो घर उज्यालो बनाउन सक्छन् ।– जुन नारी हरेक दिन स्नान गरेर सफा एवं स्वच्छ वस्त्र लगाएर घरमा प्रवेश गर्छिन् भने त्यस्तो नारी भएको घर एकदमै आनन्ददायी हुन्छ । – पतिव्रत धर्मको पालना गर्ने नारी भएको घरमा पनि कहिल्यै झगडा पर्दैन ।
यो पनि हेर्नुहोस ! नेपाल आइडल रवि ओड र अस्मिता अधिकारीको नयाँगीत सार्वजनिक (भिडियो सहित) काठमाडौँ । नेपाल आइडल सिजन २ का विजेता रवि ओड र सोही कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धागरेकी अस्मिता अधिकारीको स्वरमा रहेको नयाँ गीत बजारमा आएको छ । ‘च्याप्प समाउँदै’ बोलको गीत बिहीबार युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल आइडलको विजेता भएसँगै रवि ओडले एकपछि अर्को गीत बजारमा ल्याउँदै आएका छन् । उक्त नयाँ गीतमा सोही आइडलकी गायिका अस्मिता अधिकारीले रवि लाई साथ दिएकी छिन् ।सार्वजनिक गीतमा कृष्ण केसीको शब्द तथा हरि लम्सालको सङ्गीत रहेको छ ।
गीतको मिक्सिङ मास्टरिङ चन्द्र चौधरीले गरेका छन् । पछिल्लो समयका चर्चित अभिनेता आकाश श्रेष्ठ तथा वर्षा राउतले गीतको भिडियो मा अभिनय गरेका छन् । निकेश खड्का भिडियो का निर्देशक हुन्। गित निकै राम्रो र उत्कृष्ट भएको दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । भिडियो हेर्नुहोसः
जिग्री–पाँडे, बले, कक्रोज लगायतका कलाकार बिना आजबाट भद्रगोल प्रसारण हुने ।